Luke Shaw Oo Durba Xasilooni Darro Ka Abuuraya Qolka Labiska Man United: “Ciyaartoyda Wey Khiyaameen Ole Gunnar Solskjaer” | Somali football world
Home SOOMAALI Luke Shaw Oo Durba Xasilooni Darro Ka Abuuraya Qolka Labiska Man United:...
Luke Shaw Oo Durba Xasilooni Darro Ka Abuuraya Qolka Labiska Man United: “Ciyaartoyda Wey Khiyaameen Ole Gunnar Solskjaer”
Manchester United waxay kaalinta siddeedaad kaga jirtaa horyaalka Premier League, waxaanay hal dhibic ka sarraysaa Burnley oo sagaalaad fadhida, laakiin waxay xaaladdeedu sii xumaan kartaa haddii ay guul ka keeni weydo ciyaarta ay berri martida ugu noqonayso Chelsea, taas oo ay u baahan tahay inay guul kala soo laabato si ay kaalinta shanaad ugu soo laaban karto.
Markii shaqada laga caydhiyey Jose Mourinho xili ciyaareedkii hore, waxa United ay tababare ku-meelgaadh ah u magacowday Ole Gunnar Solskjaer oo tobankii ciyaarood ee ugu horreeyey sameeyey rikoodho guulo ah oo lala yaabay, kuwaas oo xattaa macallinkii ruug-caddaaga ah ee Sir ALex Ferguson aanu xilliyo badan samaynin, hase yeeshee markii shaqada si rasmi ah loogu dhiibay, wax walba dhinaca kale ayay isku rogeen.
Manchester United waxay ka qadday Champions League xili ciyaareedkan, waxaanay ka dheelaysaa Europa League, laakiin fasal ciyaareedkan hadda socda way adag tahay in la saadaaliyo maadaama ay fadhido kaalinta siddeedaad.
Dad badan waxay is weydiiyeen sababta United ay halkaas hoose ugu jirto inkasta oo ay jireen dhaawacyo badan, laakiin waxa su’aashaas si cad uga jawaabay difaaca bidix ee kooxdaas, Luke Shaw oo caddeeyey in ciyaartoyga kooxdu ay khiyaameeyaan tababarahooda Solskjaer iyo taageereyaasha xili ciyaareedkan.
24 jirka reer England, waxa uu tilmaamay in ciyaartoygu ay sabab u yihiin in tababaruhu ku fashilmo dagaalkiisa Old Trafford iyo badbaadinta mustaqbalkiisa.
“Dhamaanteen waynu ognahay sida uu tababaruhu iskugu dayey in uu dhabarka saarto dhalleecaynta cili ciyaareedkan. Waanu ku amaanaynaa taas, laakiin waxa jirta waqti ay ciyaaryahannadu ay tahay inay naftooda eegaan oo ay xaqiiqsadaan in dhamaan wax walba iyaga ka yimaaddeen.” Ayuu yidhi Luke Shaw.
Shaw oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi: “Tababaruhu masii wadi karo inuu na difaaco oo uu canaanta dusha saarto. Annaga ayay hadda noo taallaa, maadaama aanu nahay kuwa u baahan in ay cambaaraynta garbaha saartaan oo ay bilaabaan inay garoonka kusoo bandhigaan.
“Ole wuu ka duwan yahay tababareyaashii hore ee aan kula soo ciyaarnay United oo aan hoos nooga dhigi jirin canaanta. Tababare kasta waxa uu isku dayaa hannaankiisa gaarka ee uu wax u qabto, xirfadle ahaanna, waa inaad aqbasho jidka ay rumaysan yihiin in loo mari karayo guusha.
“Qolka lebbiska waxa uu mar walba nagu ogeysiiyaa, haddii aanaan samaynin wixii uu naga filayay, laakiin ma jiraan wax badan oo uu samayn karayo marka aanu dibedda uga nimid garoonka. Markaa annaga ayay noo taallaa.
“Ole kaliya waxa uu wax badan ka samayn karaa inoo na diyaariyo, laakiin marka uu siidhigu dhaco anaga ayay tahay inaanu caddayno waxa ay ciyaartoyga Manchester United u qalmaan.
“Dhamaantayo halkan ayaanu joognaa, sababtoo ah tababaruhu wuu na rumaysan yahay dhamaanayo, balse mararka qaarkood xili ciyaareedkan annaga ayaa hoos u dhignay isaga, nafahayaga iyo taageereyasha Manchester United.”
Previous articleWar cusub oo ka soo baxaya mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda Manchester United
Next articleXASAASI: Man City Oo Laga Yaabo In Laga Xayuubiyo Horyaalkii Ay Ku Guuleysteen 2014 & Warbaahinta Ingiriiska Oo Qatar Kale Kashiftay.